Mutongi weScotland anokanda chinetso chemakirabhu ehusiku kuenda kune COVID-19 pasipoti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Scotland Kupwanya Nhau » Mutongi weScotland anokanda chinetso chemakirabhu ehusiku kuenda kune COVID-19 pasipoti
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • mumhanzi • nhau • vanhu • Scotland Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Pasi pechirongwa ichi, dzimwe nzvimbo dzeScotland, dzinosanganisira makirabhu ehusiku, zviitiko zvisingaonekwe zvemukati zvine vanhu vanopfuura mazana mashanu, zvimire zviitiko zvekunze nevanhu vanopfuura zviuru zvina uye chero chiitiko chine vanodarika zviuru gumi, vanofanirwa kutarisa kuti munhu wese anopfuura makore gumi nemasere akabayiwa jekiseni re COVID -500.
Husiku Nguva Maindasitiri Sangano, Scotland inomhan'arira kuvhara nyowani COVID-19 yekudzivirira pasipoti system.
Mutongi weScotland anotonga achipesana nevanokumbira, achiti hurumende inogona kuzadzikisa chirongwa ichi.
Night Time Industries Association, Scotland yakashora danho iri se "rusarura" kune dzimwe nzvimbo.
Mutongi weSottish, Lord David Burns, nhasi varamba kupokana kwepamutemo kuScotland kuri kuuya COVID-19 jekiseni repasipoti, vachirova mhosva yakaunzwa ne Husiku Nguva Maindasitiri Sangano, Scotland izvo zvakatsvaga kudzivirira iyo chiyero kuti isazoshanda.
Mumutongo wake, Lord David Burns vakatonga vachipesana nezvakataurwa nevakakumbira kuti hurongwa uhu "hwakanga husina kuenzana, husina musoro kana husina musoro" kana kuti kutyora kodzero dzevanhu.
Sekureva kwemutongo wemutongi, chirongwa ichi chakawira pasi pezvaigona kuitwa nehurumende semhinduro kudenda iri uye kuti "kuyedza kugadzirisa nyaya dziri pamutemo dzakatarwa nenzira yakaenzana".
Mutongi akatiwo hurongwa uhu huchaongororwa neparamende nemakurukota, ane basa mumutemo kubvisa mitemo isingachadiwe kuchengetedza hutano hweveruzhinji.
Queen's Counselling (QC) Ishe Richard Keen, gweta rinomiririra iyo Husiku Nguva Maindasitiri Sangano, Scotland, yakashora chirongwa ichi se "kusarura" kune dzimwe nzvimbo kuDare reSession, uye ikati "kodzero dzakakosha dzepamutemo" dzevanokumbira dzinofanira kuchengetedzwa.
Achitaurira hurumende yeScotland, QC James Mure akataura kuti chirongwa ichi chakagadzirwa apo National Health Service (NHS) yakanetsekana zvakanyanya nekuda kwedenda iri. Sekureva kwaMure, chirongwa ichi chinotsvaga kuchengetedza nzvimbo dzakavhurika dzinopa njodzi yekutapurirana uye kukurudzira vanhu kuti vauye kuzobayiwa majekiseni.
Pasi pechirongwa, zvimwe ScotlandNzvimbo, kusanganisira makirabhu ehusiku, zviitiko zvisingaonekwe zvemukati zvine vanhu vanopfuura mazana mashanu, zviitiko zvekumira panze nevanhu vanopfuura zviuru zvina uye chero chiitiko chine vanopfuura zviuru gumi vanofara, vanofanirwa kutarisa kuti munhu wese ane makore anopfuura gumi nemasere akabayiwa jekiseni reCCVID-500.
Hurumende yeScotland yakati yakapa mabhizinesi akanganisa mavhiki maviri kubva mukuitwa kwechirongwa ichi, icho chiri kufanira kutanga neChishanu, "kuyedza, kugadzirisa uye kuvaka chivimbo muhurongwa hunoshanda" hunodiwa usati wasimbiswa muna Gumiguru 18.
Sekureva kwehuwandu hwehurumende yeUK, 92% yeScots vakagamuchira mushonga wavo wekutanga wecoronavirus, nepo vangodarika makumi masere nemasere muzana vakapetwa kaviri.